बधाई ! दुधे बालक च्या’पेर मैदानमा हो’मिएकी अ’निता चौधरी – Points Nepal
बधाई ! दुधे बालक च्या’पेर मैदानमा हो’मिएकी अ’निता चौधरी
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष ०८, २०७८ समय: ९:०९:११
राति चाररपाँचपटक उठेर छोरालाई दूध चुसाउनुपर्छ । दिसा–पिसाब गरेरनगरेको हेर्नुपर्छ । बिहान ६ बजेदेखि नै प्रशिक्षण । त्यसैले ८ महिने छोरा अमनलाई काखी च्यापेर दाङ लमही–७ हसनापुरकी अनिता चौधरी क्रिकेट खेल्न मैदान पुगिन् ।
प्रशिक्षक सन्जु क्षत्री पनि अनिता लाई अत्यन्तै अनुशासित र क्रिकेटमा लगाव भएकी खेलाडी मान्छिन् । भन्छिन्, ‘अनिता टिममा भएपछि आफूहरूलाई पनि ऊर्जा मिल्छ । अरू खेलाडीलाई पनि प्रेरणा हुन्छ । उनको बलिङमा जादु छ ।’ अनितालाई दाङको टोलीमा ल्याउन पूर्वप्रशिक्षक देवेन्द्रसिंह ठकुरीको विशेष हात छ । उनी अनिताको बलिङबाट खुबै प्रभावित भएका थिए ।
चार दिन चलेको छनोट स्पर्धामा अनिताका छोरालाई हेरचाह गर्न अनिता र टिमका अरू खेलाडीले पालो दिएर सघाए । १४ खेलाडीमध्ये एक जनाले पालो दिएरै अनितालाई मैदान पठाउने गरे । आठ महिनाकी सुत्केरी आमा भएकाले निरन्तर अभ्यास गरिरहँदा छिटो थाक्ने र ढाड दुख्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
तर आफू प्रशिक्षणमा खटिरहन पनि उनी तत्पर छिन् । आफूले निरन्तर क्रिकेट खेल्ने र छोरालाई समेत आफ्नो खेल देखाउने रहर उनको छ । भन्छिन्, ‘छोरालाई समेत क्रिकेट खेलाडी बनाउने धोको छ ।’
आमा भएपछि खेलमा लागिरहेका धेरै खेलाडी भए पनि मैदानमै बच्चा च्यापेर जाने र दूध चुसाउने आमा खेलाडीको सूचीमा अनिता उदाहरणीय बन्न सक्ने प्रतियोगिता संयोजक कैलाश रोकामगर ठान्छन् । अनितालाई प्रोत्साहन गरी अघि बढाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले सुनाए ।
नेपाली महिला खेलाडीले विवाहपछि खेल्न पाउने मौका नै कम हुने र चौधरी समुदायको प्रतिनिधित्व गरेकी अनिताले छोरालाई साथमै लिएर पनि खेल्न तयार भएकाले उनीजस्ता खेलाडीले मौका र हौसला दुवै पाउने रोकामगरको भनाइ छ । ‘हरेक खेल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र रमाइलो लाग्छ,’ अनिताले भनिन्, ‘खेलबाटै चिनिन पाउँदा झनै सन्तुष्टि मिल्छ ।’
बुबाआमाले क्रिकेटबारे केही नबुझेको भए पनि आफ्नो रहर र मिहिनेतलाई भरपूर साथ दिएको उनी सुनाउँछिन् । काठमाडौंमा जागिरे रहेका उनका पति मिलन चौधरी पनि उनको खेलप्रति सहयोगी छन् । ‘कमब्याक’ का लागि सासूससुरा र पतिको हौसलाले थप ऊर्जा मिलेको अनिताले सुनाइन् ।
उनको टिम फाइनलमा रूपन्देहीसँग १८ रनले पराजित भएको थियो । प्रयासका बाबजुद उनी लुम्बिनी प्रदेश टिमको १४ सदस्यीय टोलीमा पर्न सकिनन् । लुम्बिनीले धनगढीमा प्रधानमन्त्री कपमा पहिलो दुई खेल जितेर सेमिफाइनल पुगिसकेको छ । अनलाइन न्युज बाट
Last Updated on: December 23rd, 2021 at 9:09 am